နှုန်းအဘယ်သူမျှမ - ကောလိပ်, ဆောင်းပါးများ, စာစီစာကုံး & ပြန်စသည်, အရေးအသားသိကောင်းစရာများ
5မတ်လကြိမ်မြောက်, 2018 Sankashti Chaturthi Moonrise Time In India Sankashti Chaturthi or Sankatahara Chaturthi or Sankat Nivaran Chaturthi is an auspicious day dedicated to Lord Ganesha, also known as Ganpati who is son of Lord Shiva and Goddess Parvati. Sankashti is celebrated on the Chaturthi (4th day) of the Krishna Paksha (dark lunar phase) of…
Sridevi စာစီစာကုံး, အတ်ထုပ်ပတ်တိ, ပရိုဖိုင်းကို, မိသားစု, super-hit, Movies, နှစ်ပေါင်းများစွာနိဂုံးကို Sridevi ရဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်. နောက်တဖန် Gautamji အားဖြင့်ပစ်ခတ်. ဤသည်စာစီစာကုံးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းရေးသားခဲ့, နောက်ကျောစက်တင်ဘာအတွင်း 1994 ဒါပေမယ့်ယနေ့အဖြစ်မှန်. Sridevi အပေါ်အက်ဆေး “လူတိုင်းအရေအတွက်ကတဦးတည်းကြယ်ပွင့်ငါ့ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါအရမ်းပျော်ရွှင်ခံစားရသည်။” ('85) “ငါထိပ်သို့ရောက်ရှိကြမထင်ကြဘူး။”…
ဒေလီအိန္ဒိယလေးပါးကိုအဓိကမြို့ပြမြို့ကြီးများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အိုင်တီကုမ္ပဏီများအနေနဲ့အစဉ်အဆက်တိုးပွားလာမှုနှင့်အတူ, စက်ရုံတွေ, စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ဘဏ်များ, ဒေလီအဓိကပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အချက်အချာတစ်ဦးအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါသည်. ဒေလီတက္ကသိုလ်က၎င်း၏ပညာရေးစံချိန်စံညွှန်းများအားလုံးကိုအိန္ဒိယကျော်ရေပန်းစားသည်. ထောင့်လှည့်ပတ်ဘုတ်အဖွဲ့စာမေးပွဲနှင့်အတူ, ကနေကျောင်းသားများကို…
ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့ – ဒီဇင်ဘာလ 1, 2017 : စာစီစာကုံး, အကွောငျး, ကြွေးကြော်သံ, quotes, မက်ဆေ့ခ်ျ, ဘယ်လိုအခမ်းအနားကျင်းပရန်, မိန့်ခွန်း World AIDS Day AIDS ရောဂါနှင့် ပတ်သက်. လူထုအသိပညာပေးမှဒီဇင်ဘာလ 1 ရက်နေ့တွင်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပခြင်းဖြစ်သည် (ရယူ Immuno Deficiency Syndrome). AIDS ရောဂါကြောင့်လူ့ Immunodeficiency ၏ရောဂါကူးစက်စေတဲ့ရောဂါရောဂါဖြစ်ပါသည်…
Looking for How to WriteaLetter to editor highlighting street and roads problems experiencing water logging during the monsoon season? Here we are withaLetter to editor about water logging problems during monsoon season in metro cities like Delhi. မုတ်သုန်ရာသီအတွင်းရေသစ်ထုတ်လုပ်ရေးပြဿနာများကိုအကြောင်းကိုအယ်ဒီတာမှပေးစာ 1065/20 Tri Nagar Delhi-110035…